Fananganana « Pylône » eny Namehana Naato aloha ny noho gidragidra
Ny sabotsy lasa teo, nanohitra ny fametrahana pylône momba ny fifandraisan-davitra ny mponina tao Namehana. Nisy mihitsy ny filanjana sorabaventy naneho tsy fankasitrahana.
Nidina nijery ifotony ny raharaha ny solombavambahoaka voafidy tao amin’ny distrikan’Avaradrano , Gerry Randriambolahaina, ny talata lasa teo. Nihaino ny olona mpanao fihetsiketsehana sy ny tompon’ny trano misy ilay pylône. Nambaran’ity farany fa nandalo ambaratonga rehetra hahafahana manangana izany pylône izany eo ambonin’ny tranony izy ka nahazoany alalana. Nomarihany fa tsy mahazo « réseau » na fahitalavitra ny ao an-toerana ka antony ny hananganana io « pylône » io. Anisan’ireo mitsipaka maridrano izany koa ny masera ao amin’ny Ekar Namehana ho fitsinjovana indrindra ny fahasalaman’ny mpianatra marobe ao amin’izy ireo. Nandray fepetra avy hatrany ny depiote Gerry Randriambolahaina. Hisy, araka izany, fihaonana eo amin’ny sefo distrika, ben’ny tanàna, sefom-pokontany ary ity depiote ity ka hita eo izay fanapahan-kevitra ho raisina saingy kosa haato ny fananganana ny « pylône ». Marihana fa saika nantsagana tamina toerana akaiky teo io « pylône » io fa noho ny tsy faneken’ny olona hatrany dia izao nafindra tamina tranon’olon-tsotra indray.